Isbadal Wanaagsan oo Dirba u Soo Kordhay Somalida Itobiya – Rasaasa News
Isbadal Wanaagsan oo Dirba u Soo Kordhay Somalida Itobiya
Oct 8, 2010 ethiopia, Isbadal Wanaagsan oo Dirba u Soo Kordhay Somalida Itobiya, Ogaden, somali state
Tan iyo intii ay bilaabatay waan waanta nabadeed ee u dhaxaysay dawlada iyo ururadii hore ula dagaalamayey ee UWSLF iyo ONLF, waxaa soo kordhaysa kalsooni wayn iyo isu soo dhawaansho u dhaxeeya dawlada iyo dadweynaha degaanka Somalida.
Waxaa meel walba oo ka mid ah ismaamulka Somalida saamaysay neecaw nabadeed oo ay dadwaynuhu aad ugu diirsadeen.
Waxaa si caadiya ugu safra magaalooyinka baabuur noo walba leh oo isugu jira gaadiidka dawlada, kuwa dadweynaha iyo gaadiidka hayadaha samafalka iyo horumarinta.
Waxaa furfurnaan hal dhinaca ah laga dareemayaa dadweynaha dhexdiisa iyaga oo waxa ay hadal hayaan ee kaliya uu yahay nabad galyada dhacday iyo in uu imandoono horumar isbadal ku keena nolosha dadweynaha.
Waxaa istaagay xadhigii faraha badnaa ee dadka la halaloobin jiray iyaga oo lagu eedaynayo nabad diid, waloow ayna wali jirin wax maxaabiis ah oo la siidaayey oo dhinaca ururka ONLF ah.
Dhinaca kale dawlada federalka ayaa waxaa iyadana ka muuqda kalsooni ku aadan degaanka Somalida. Waxaana muuqda in dirba ay dawladu kordhisay sadkii ay dawlada federalka ku lahaayeen dadweynaha degaanka Somalidu.
Labada wasiir ee loo magacaabay in ay u galaan dawlada wadaaga ah degaanka Somalida ayaa hordhac u ah isbadal balaadhan oo la filayo in lagu sameeyo degaanka Somalida.
Waxaa la dhaafiyey Degaanka Somalida Abay Sahaye oo mudo dheer uu hogaanka degaanka Somalidu gacanta ugu jiray, marar badan cabasho laga sheegan jiray.
Waxaa la filayaa in hawlwadeenada degaanka Somalidu ay noqon doonaan dad isbadal ku samayn kara shaqooyinka ay masuulka ka yihiin.
Hadii uu hir galo qorsha socda ee qodista shidaalka gabalka, waxaa la filayaa in uu gabalku dhakhso u noqon doono degaanada ay dadkiisu ugu qanisan yihiin bariga iyo badhtamaha Afrika, sida laga soo xigtay international energy agency.